Amapulasitiki amakhanda amazinyo angaphambili: izinkomba, ukubuyekezwa, isithombe
Ukumomotheka okumnandi, amazinyo enempilo, aqinile, anemvula eqhwa yilophupho lomuntu. Kodwa-ke, ukudla okunomsoco, imikhuba emibi, ukuhlanzeka okuhlanzekile - konke lokho kuyathinta impilo yamazinyo. Ukuze ufihle okwesikhashana ukwehluleka komlomo womlomo, odokotela bamazinyo basebenzisa amakhanda epulasitiki emazinyo angaphambili. Impendulo kule nqubo isivele ishiye amakhasimende amaningi. Ake sicabangele le miqhele ngokuningiliziwe, izinzuzo nezinkinga zabo, izinkomba zokusetshenziswa kanye nezinkomba zamakhasimende.
Incazelo emfushane yomqhele weplastiki
Amapulasitiki asegulini ngokuvamile asetshenziswa odokotela bamazinyo njengesikhashana. Kodwa uma iklayenti sinenkinga yezezimali, khona-ke ingasetshenziswa njengomphela. Imiqhele yepulasitiki emazinyo angaphambili, okubukeziwe okuvele kushiye iziguli eziningi, ukudala ngokuphelele ukulingisa amazinyo emvelo, kulula ukwenza. Kodwa banamandla kakhulu kunamakhanda okwenziwa kwezinye izinto.
Imikhosi enjalo ingakwazi ukufihla amazinyo aqoshiwe bese yenza ukumomotheka okuningi. Zakhiwa kalula, ngakho-ke ungakwazi ukuqeda ukukhubazeka kwangaphandle kwamazinyo ngesikhathi esifushane. Imiqhele yepulasitiki emazinyo angaphambili ingasetshenziswa njengomphela. Futhi ngamazinyo okuhlafuna, angasetshenziswa kuphela okwesikhashana, ngoba angeke abhekane nomthwalo osindayo.
Izinzuzo zomqhele weplastiki
Amakhanda epulasitiki ayajabula ngezinzuzo:
Ukubukeka kokubukeka ngemuva kokusungulwa kwazo.
Inani elingathengi, ikakhulukazi kubantu abanenkinga yezezimali ezinzima.
Kungenzeka ukukhiqizwa okusheshayo.
Ukuvikelwa okwesikhashana kwamazinyo angaphambili kusuka emoyeni abandayo namabhaktheriya ayingozi.
Ukungahleleki komqhele weplastiki
Naphezu kwezimfanelo eziningana, imiqhele yepulasitiki nayo inobungozi:
Umbala ushintsho. Ukudla, ama-dyes wokufakelwa afakwa engxenyeni yepulasitiki bese eshiya amabala.
Umqhele ungasuka emzimbeni.
Kungenzeka ukuthi ukungezwani komzimba kungenzeka, ngoba le nto iqukethe izinhlanganisela ezihlukahlukene ezikwazi ukukwenza ukuthi umuntu aphendule.
Ipulasitiki ine-porous structure, ngakho amabhaktheriya angakwazi ukuqoqa kuyo. Isiguli kufanele sinakekele ngokucophelela amazinyo kanye nemikhosi.
Imiqhele yepulasitiki isula ngokushesha, ngakho ayikwazi ukusetshenziswa isikhathi eside.
Emaphethelweni omqhele womqhele angalimaza izicubu ezithambile.
Imiqhele yepulasitiki: izinkomba zokusetshenziswa
Imiqhele yepulasitiki inconywa ukuthi isetshenziswe kumacala anjalo:
Uma kunamaphutha amancane emazinyweni angaphambili (isimo esingavamile, ubukhulu noma umthunzi we-koqweqwe lwawo), imiqhele yepulasitiki izosiza ukugcina ukubukeka kombukiso.
Ukulondoloza ithuba lokufuna.
Uma kudingekile ukuvikela i-tooth evulekile kusuka ekuvezweni kokubandayo namabhaktheriya ngaphambi kokufakwa kwesakhiwo esihlala njalo.
Ukuvimbela ukutheleleka kwe-gingiva.
Uma kudingekile ukuvala izimplantshi ngenkathi umqhele unomphela ukhiqizwa futhi ufakwe.
Ukuze ungazishintshi umuthi wamazinyo;
Endabeni yesifo se-periodontal, lapho kudingekile ukuhlukanisa amazinyo.
Ukubuyisela isichazamazwi esivamile.
Imiqhele yepulasitiki, izithombe ezizobekwa ngaphansi, akukhuthazwa ukuthi kusetshenziswe kula macala alandelayo:
Uma isiguli sibhekene nama-polymeric compounds.
Uma isiguli sinokuxilongwa ngezifo zengqondo.
Uma isiguli sine-bruxism ( gnashing teeth).
Futhi kufanele kuqashelwe ukuthi izingane azikwazi ukubeka imiqhele yeplastiki.
Inqubo yokufaka umqhele weplastiki
Ungenza umqhele weplastiki e-laboratory noma ehhovisi likadokotela. Uma udokotela ezenza ngokwakhe, khona-ke umqhele onjalo, cishe, uzoba okwesikhashana, futhi awukwazi ukuwugqoka kungaphezu kwenyanga eyodwa. Okokuqala, udokotela kufanele enze isikhunta sinozinyo nge-plastic mass. Ngemuva kwalokho, izinyo zigawulwa. Kulabo abanezimpande eyodwa, udinga ukususa izinzwa bese ubeka iziteshi. Emanzini ahlakulayo, kungcono ukushiya izinzwa, ngakho-ke, ubaphatha, sebenzisa izidakamizwa zokubulala umzimba. I-powder ekhethekile kumele ifakwe embonweni ophumela. Khona-ke idinga ukufakwa kuzinyo, futhi isuswe lapho ubukhulu bukhululeka. Umqhele kufanele ukhanyiswe futhi uphuthukiswe. Futhi, ukulungisa i-samente kumele kusetshenziswe ukuyilungisa.
Uma umqhele wepulasitiki usetshenziselwa ukuhlala unomphela, ungenziwa ngesisekelo sensimbi. Ngakho kuyoba namandla. Umqhele onjalo uphethwe ngepulasitiki phezulu, futhi uma kukhona okuwehla, kungabuyiselwa kalula. Umqhele wepulasitiki unomphela ungasetshenziswa iminyaka engama-3, futhi ngesisekelo sensimbi - iminyaka emihlanu. Uma ingasetshenzisiwe ngesikhathi, ingalimaza wonke umlomo womlomo.
Umqhele wepulasitiki ususiwe kanjani?
Ukuze ususe umqhele onjalo ngezinyo, kufanele uqale usebenzise i-ultrasound. Ngenxa yalokhu, isenzo samenti sinamandla. Khona-ke udokotela usebenzisa amadivaysi kaKopp. Ukusebenzisa ukunyakaza kokugijima, umqhele ususwa kancane ngezinyo. Yena ngokwakhe uhlala engakahleleki. Ngemuva kwalokho, udinga ukususa izinhlayiya zezinyolo kuzinyo. Phakathi nenqubo, isiguli asizwa ubuhlungu.
Izindleko zomqhele weplastiki
Ngokuqondene nentengo yomqhele onjalo, kuxhomeke ezinkambweni eziningi. Izinga lobuchwepheshe lobuchwepheshe, imitholampilo, ubukhulu bomsebenzi. Uma umqhele wepulasitiki usetshenziselwa okwesikhashana futhi wenziwa ngqo ehhovisi likadokotela, khona-ke kuzobiza kusuka ku-ruble 1000. Umqhele owodwa wesikhashana, kodwa owenziwe ebhokisatri, uzobiza kusuka kuma-ruble angu-4000. Uma umqhele wepulasitiki usetshenziselwa ukuhlala njalo, intengo yayo izoba ngama-ruble angu-5500. Futhi uma kwenziwa ngesisekelo sensimbi, singadla ama-ruble angu-6500.
Amakhanda ePlastiki: ukubuyekezwa
Ukusetshenziswa komqhele wepulasitiki kuvamile. Abantu abaningi bazama le nqubo futhi bashiya imibono yabo. Ukubuyekeza kuphikisana kakhulu. Abanye abantu banelisekile ngokuthi ipulasitiki ikhanya kakhulu futhi ayizibopheli izinyo. Ngaphezu kwalokho, iziguli eziningi ziphawula inani eliphansi kakhulu, uma liqhathaniswa namanye amakhanda. Ngokuqondene nokubuyekezwa okungalungile, abantu abaningi bakhononda ngokuthi imiqhele enjalo kunzima kakhulu ukuyihlanza, bayashesha ngokushesha ukuwaheha. Udinga ukulinganisa itiye eliqinile, ikhofi, izithelo eziningi. Iziguli eziningi azijabuli kakhulu ngomphumela wesikhashana womqhele weplastiki. Kufanele kucatshangelwe ngokucophelela futhi kushintshwe ngezikhathi ezithile. Kodwa abanye abantu bathi umqhele wepulasitiki wawusindise ezinkingeni ezithile, njengokunyamaza kwezinyosi yemvelo nokuvuvukala kwezinsini. Imikhosi enjalo isetshenziselwa ukuqeda izintambo zangaphandle, kodwa hhayi ukwelashwa. Njengoba sekushiwo ngenhla, ukubuyekezwa kunalokho kuphikisana. Ngakho-ke, isinqumo sombuzo - kungakhathaliseki ukuthi usebenzise imiqhele enjalo noma cha - uhlala kuphela kuwe.
Ekuphetheni, ngingathanda ukungeza lokho ngaphambi kokusebenzisa lolu hlobo lwemikhakha, thintana nodokotela wakho bese uhlola ukuhlolwa kwe-allergen. Imiqhele enjalo iyokusiza ukufihla amaphutha amancane emazinyo angaphambili futhi wenze ukumomotheka kwakho kukhange nakakhulu.
Qaphela amazinyo akho, udle kahle, shiya imikhuba emibi, futhi ukumamatheka kwakho kuyohlale kuvulekile futhi kujabulisa!
Amachashazi amhlophe ezinsini ezinganeni: izizathu, ukwelashwa
Desna: ukwelashwa kwezifo nokuvimbela kwabo
Imithi ephumelelayo yezifo ze-periodontal nezindlela zokwelapha lesi sifo
Ukulungiswa kwamazinyo kwenziwa kanjani?
Metropolitan Ilarion Alfeev: Biography, izithombe, izintshumayelo
Solcoseril (gel ocular)
Stroke e Izinja: Izimbangela nosizo lokuqala
Okuthandayo nokuzilibazisa ku isifinyezo, isibonelo kakhulu ngokufanele ukuhanjwa izikhundla ezithile. Yini ukubhala iCV?
Amanzi incibilikiswa ekhaya kungasetshenziswa ngezinhloso ayeyisimonyo, it is akhuhlwe izindololwane kanye izithende, ngemva m izinqubo eziningana ezifana roughened
Phloem - Iyini? Umsebenzi, isakhiwo phloem, xylem Ngokungafani
Ikhukhamba "Libelle F1": ukubuyekezwa kanye izici
I-smartphone ye-Philips S308: ukubuyekezwa, izithombe nezici